किन लिइन् गायिका मिलन अमात्यले डिभोर्स ? - चर्चामा - साप्ताहिक
किन लिइन् गायिका मिलन अमात्यले डिभोर्स ?
पूर्वोत्तर भारतीय राज्य आसाममा जन्मिए पनि नेपालमा विवाह गरी सांगीतिक उचाइ हासिल गरेकी गायिका मिलन अमात्यले गत सोमबार आफ्नो सात वर्ष लामो वैवाहिक जीवन अन्त्य गरिन् । पहिरन व्यवसायी मेन्सन अमात्यसँग परम्परागत विवाह गरेकी गायिका अमात्यले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेकी हुन् ।
केही साताअघि गायिका अमात्यले नै मेन्सन अमात्यसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । श्रीमान्सँग विगत सात महिनादेखि अलग्ग बस्दै आएकी मिलनले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएको कुरा गोप्य नै राखेकी थिइन् । सोमबार अदालतको निर्णयसँगै मिलनका श्रीमान् मेन्सनले नै सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन आधिकारिक रूपमा टुंगिएको जानकारी गराएका हुन् । मिलनका श्रीमान् मेन्सनले भने– मिलनकै चाहनाअनुसार हामी अलग हुने बाटोमा गएका हौं । मेन्सनका अनुसार मिलन पछिल्ला सात महिनादेखि आसामबाट काठमाडौं बसाइँ सरेका उनका बुवा–आमासँग बस्दै आएकी थिइन् ।
केही वर्षअघिसम्म गायिका मिलन अमात्यका अधिकांश सांगीतिक कार्यक्रमदेखि रेकर्डिङसम्मका गतिविधिमा श्रीमान् मेन्सन अमात्य प्रत्यक्ष सहभागि हुन्थे । मिलन सहभागी भएका सांगीतिक कार्यक्रमहरूको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिने काम पनि मेन्सनले नै गर्थे । रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिन जाने क्रममा समेत मिलनलाई मेन्सनले नै साथ दिइरहेका थिए । यद्यपि, पछिल्लो समयमा मिलनले मेन्सनलाई ती सबै गतिविधिबाट टाढै राखेकी थिइन् । झन्डै एक वर्षदेखि उनीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रन थालेको बताइन्छ । पारिवारिक खटपट बढ्दै गएका कारण मिलन मेन्सनको घर त्यागेर माइतीमा बसाइँ सरेकी थिइन् ।
मैले मिलनका हरेक सांगीतिक गतिविधिमा कतिसम्म साथ दिएको थिएँ भन्ने कुरा प्रत्येक गायक–गायिका तथा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी छ, मेन्सन भन्छन्–अहिले आएर उनले मैले उनको सांगीतिक यात्रामा कुनै सहयोग गरिन भनेर असन्तुष्ट भएको बताइछन् । मेन्सनका अनुसार मिलनले उनीबाट किन डिभोर्स चाहिन् भन्ने कुरा उनले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन् । छ वर्षअघि विवाह भए पनि उनीहरूले हालसम्म सन्तान जन्माएका थिएनन् ।
गायिका मिलन अमात्यले भने आफूले घर परिवारलाई समय दिन नसकेकाले वैवाहिक जीवन टुंग्याउन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । घर परिवारलाई समय दिन सकिन, म आफ्नो सांगीतिक यात्रा पनि रोक्न चाहन्न, त्यसैले समझदारीमै डिर्भोस भएको हो, मिलनको भनाइ छ ।
दीपक लिम्बूसँगको सम्बन्ध
मेन्सन र मिलनले समझदारीमै डिभोर्स गरेको बताए पनि अधिकांश अनलाइन मिडियाले गायक दीपक लिम्बूका कारण उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिएको दाबी गरेका छन् । स्वदेशदेखि विदेशसम्मका सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा दीपक र मिलन नजिकिएको समाचारहरूमा छ्यापछ्याप्ती छ । गायक लिम्बू विवाहित तथा एक छोराका बुवा हुन् । काठमाडौं बाहिर तथा नेपाल बाहिर हुने सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने क्रममा नजिकिएका उनीहरूले आ–आफ्नो वैवाहिक जीवन टुंग्याएर आफ्नै जोडी बनाउने तयारी गरेको समेत कतिपयको दाबी छ । कतिसम्म भनिन्छ भने– उनीहरूले क्यानाडामा सेटल हुन आवेदन समेत दिएका थिए । यद्यपि क्यानाडाले दीपकलाई मात्र भिसा दिएपछि मिलन दीपकसँगै क्यानाडा जान सकिनन् । यतिबेला दीपक अमेरिकामा छन् । अमेरिकामै रहेका दीपकसँग साप्ताहिकले गायिका मिलन अमात्यसँगको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गरेको थियो जसमा उनले मिलनसँगको प्रेम सम्बन्धलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
के भन्छन् मेन्सन अमात्य ?
तपाईंहरूको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थालेको कति भयो ?
करिब एक वर्ष भयो । झन्डै सात महिना अघिदेखि हामी अलग–अलग बस्दै आएका थियौं ।
सम्बन्ध विच्छेद नै गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?
मिलनले सात महिना अघिदेखि नै स्वतन्त्रता चाहियो, वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिरहन गाह्रो भयो भन्दै आएकी थिइन् । उनकै आग्रहमा म सम्बन्ध विच्छेद गर्ने उनको निर्णयमा सहमति जनाउन बाध्य भएँ ।
अर्थात, तपाईंलाई डिभोर्स गर्ने मन थिएन ?
आफूले विगत सात वर्षदेखि माया गरेर, हरेक पाइलामा साथ दिएर अघि बढाइरहेकी जीवनसंगीनीलाई डिभोर्स दिने चाहना कुनै पनि श्रीमान्लाई हुँदैन । यद्यपि, श्रीमतीले नै आफूसँग बस्न सक्दिन भनेपछि श्रीमान्को हातमा केही नहुने रहेछ ।
मिलन अमात्यको नाम गायक दीपक लिम्बूसँग जोडिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
मैले पनि समाचारमै पढेर थाहा पाएको कुरा हो यो । मेरो आफ्नै आँखाले उनीहरूलाई कहिल्यै सँगै देखेको छैन । यो प्रसंगमा म योभन्दा बढी केही बोल्न चाहन्न ।
फेसबुकमा मिलनको अपिल
अहिले मेरा बारेमा विभिन्न अनावश्यक विषयहरू प्रकाशन हुँदै गरेको प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । म विशुद्ध नेपाली संगीतको साधना र पूजा गर्ने तपाईंहरूकी प्रिय गायिका हुँ, हरदम प्रयासरत संगीत साधक हुँ । अहिलेको मेरो पारिवारिक र व्यक्तिगत कुराका बारेमा म मिडियामा प्रचार गर्न चाहन्नँ । म पनि मान्छे नै हुँ, मेरो पनि आफ्नो निजी जीवन छ, परिवार छ अनि मेरो पनि मन छ र दु:ख पर्दा म पनि रुन्छु । अहिले म आफ्नो निजी मामिलामा असहज अवस्थामा छु, मेरा बारेमा नकारात्मक कुरा लेखेर मलाई नराम्रो बनाउने कार्य नगर्न–नगराउन मेरो हार्दिक अनुरोध छ । केही समय मलाई कुनै पनि निजी विषयमा केही कुरा नगरिदिन र मलाई यो असजिलो समयबाट बाहिर ल्याउन र बाहिर आउन दिन सबैसँग हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
म यो विषयमा केही बोल्दिन मिलन नेवार
मेन्सन अमात्यसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने कारण के हो ?
अहिले म यो प्रश्नको जवाफ दिने पक्षमा छैन । म मानसिक रूपले तनावमा छु । उचित समय आएपछि तपाईंहरूलाई जानकारी दिनेछु ।
कुनै खास कारण त होला नि ?
हामीले सम्बन्ध विच्छेद गरेको कुरा नै अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगत कारणले नै सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । ती व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कुराहरू सञ्चारमाध्यममा ल्याउनु उचित लागेको छैन ।
तपाईंको नाम गायक दीपक लिम्बूसँग जोडेर समाचारहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् नि ?
यसरी नाम जोडिएर आएका सबै प्रसंग गलत हुन् । ती कुराले मलाई बेग्लै तनाव दिएको छ । मैले भने नि, उचित समय आएपछि म सबै कुरा सार्वजनिक गर्नेछु ।
मिडियामा आएका कुराहरूप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?
निजी तथा पारिवारिक कुराहरू मिडियामा प्रचार गरेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । मेरा बारेमा गायक दीपक लिम्बुसँग जोडिएका सबै कुरा गलत हुन् । मैले मेन्सनसँग डिभोर्स गरेको बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा सत्यता छैन ।
यसो भन्छन् गायक दीपक लिम्बू
तपाईंकै कारण गायिका मिलन अमात्यले श्रीमान्सँग डिभोर्स गरेको समाचार प्रकाशित भैरहेका छन् नि ?
मेरो र मिलनजीको नाम जोडेर गसिप बनाइएको छ । यो गलत कुरा हो ।
किन यसरी नाम जोडिएको होला त ?
खै म पनि अचम्ममा परेको छु । मिलनजी र मबीच एउटा गायक–गायिकाबीच हुनुपर्ने व्यवसायिक सम्बन्ध मात्र छ । मिलनजी आफ्नै तरिकाले आफ्नो जीवन बाँचिरहनु भएको छ । म पनि आफ्नै तरिकाले बाँचिरहेको छु । हामी दुई जनाको नाम जोड्नुको कुनै तुक छैन ।
मिडियाले नजोड्नु पथ्र्याे, तर धेरैले तपाईं र मिलन अमात्य आफैं प्रेम सम्बन्धमा जोडिनु भएको चर्चा गरेका छन् नि ?
हामी एउटै क्षेत्रमा कार्यरत छौं, सँग–सँगै सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छौं, सहकार्य गरेका छौं । सम्भवत: त्यसैलाई आधार बनाएर गसिप बनाइएको हुनसक्छ ।
तपाईंको परिवारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
म आफ्नो परिवारसँग रमाइरहेको छु । मेरो एउटा छोरा छ । हामी सबैलाई ठीकै छ । सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरू हल्ला मात्र हुन् । त्यसको पछि नलाग्न म सबैसँग आग्रह गर्छु ।